ဦး နှောက်ဆုချခြင်းဆားကစ်များတွင် DeltaFosB သည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကျဆင်းမှုတုံ့ပြန်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ဖျန်ဖြေပေးသည်။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
scicurious ရှင်းလင်းချက် - စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်အတွက် DeltaFosB ကိုကျေးဇူးတင်ပါ
နတ် neuroscience ။ 2010 ဇွန်လ; 13(6): 745-752 ။ 2010 မေလ 16 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / nn.2551
ဗင်းဆင့် Vialou,1 အဲဖရက်ဂျေ Robison,1, * Quincey C. LaPlant,1, * ပျိုးပင်အီး Covington, III ကို,1 ဒါဝိဒ်သည်အမ် Dietz,1 Yoshinori N. Ohnishi,1 ယေဇကျေလ Mouzon,1 ဩဂုတ်ဂျေ Rush, III ကို,2 အမ်မလီအယ်လ် Watts,1 Deanna အယ်လ် Wallace,2, § ဆာဂျီယိုဃ Iniguez,3 ယိုအိပ်ချ် Ohnishi,1 မိုက်ကယ်အေ Steiner,4 Brandon Warren,3 Vaishnav Krishnan,2 Rachael အယ်လ် Neve,5 Subroto Ghose,2 Olivier Berton,2, § ကာရိုအေ Tamminga,2 နှင့် အဲရစ်ဂျေ Nestler1
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် နတ် neuroscience
ဦးနှောက်အပေါ်ဖိစီးသက်ရောက်မှုအပေါ်ကျယ်ပြန့်စာပေမှမတူဘဲ, အတော်လေးနည်းနည်းခံနိုင်ရည်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ, စိတ်ဖိစီးမှုများ deleterious သက်ရောက်မှုမှလွတ်မြောက်ရန်အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီ၏စွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ H ကိုမှီကျွန်ုပ်တို့သည်ကူးယူအချက်, ΔFosB, ကြွက်များတွင်ခံနိုင်ရည်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ယန္တရား mediates ဖော်ပြသည်။ နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosB၏ induction တစ် key ကိုဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသ, လိုအပ်သောနှင့်ခံနိုင်ရည်များအတွက်လုံလောက်သောနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ΔFosBသော induction ကိုလည်းလူမှုရေးရှုံးနိမ့်သဖြင့်သွေးဆောင်အပြုအမူရောဂါဗေဒ reverse ရန်, စံလက္ခဏာ, fluoxetine များ၏စွမ်းရည်များအတွက်လိုအပ်သည်။ ΔFosBနျူကလိယ၏တုန့်ပြန်အချိုမှုမှအာရုံခံ accumbens လျော့ကျသော GluR2 AMPA အချိုမှု receptor subunit ၏ induction မှတဆင့်သည်ဤသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်နှင့်အခြား Synaptic ပရိုတိန်းမှတဆင့်။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်ခံနိုင်ရည်နှင့်လက္ခဏာအရေးယူနှစ်ဦးစလုံးအခြေခံတဲ့ဝတ္ထုမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းတည်ထောင်ရန်။
အခြားသူတွေထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD) အဖြစ်ပြင်းထန် psychopathology ဖွံ့ဖြိုးနေချိန်တွင်အကြပ်အတည်းကိုကျော်လွှားရန်အချို့သောနိုင်ခဲ့နှင့်အတူလူတွေ, ပြင်းထန်ဖိစီးပြပွဲကျယ်ပြန့်အေမြိုးမြိုးတုံ့ပြန်မှုအကြောင်းမဲ့။ စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်စွမ်း, ဆိုလိုသည်မှာ, ခံနိုင်ရည်, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုလုံလောက်သောအမူအကျင့်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ်မှာမူတည်1,2။ ခံနိုင်ရည်မြှင့်တင်ရန်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Construction ကတိကဝတ်, သည်းခံခြင်း, အကောင်းမြင်နှင့် Self-လေးစားမှုအဖြစ်စိတ်ခံစားမှု modulate နှင့်သပ္ပါယ်လူမှုရေးအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စွမ်းရည်များပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားစရိုက်များရောဂါဗေဒ vs. ဒဏ်ခံ phenotypes ပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက်အရေးပါသောပစ်မှတ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာကဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry, ဆက်စပ်. အ3,4။ စိတ်ဖိစီးမှုမှအားနည်းချက်သို့မဟုတ်ခုခံ၏ Neurobiological ဆက်စပ်မှုလူသားတွေအတွက်2ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်အရာသူတို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်များ၏အကြောင်းရင်းသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များမှာဖို့အတိုင်းအတာမသိသောဖြစ်နေဆဲ5.
စိတ်ကျရောဂါနှင့် PTSD ၏လက်ရှိကြွက်မော်ဒယ်များအနက်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုရေရှည်ဇီဝကမ္မ induces သည့် ethologically တရားဝင်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်6-8 နှင့်အမူအကျင့်9-11 အတော်ကြာအာရုံကြောဆားကစ်၏ activation နှငျ့ပတျသကျသောလူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်း, anhedonia နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောလက္ခဏာများအပါအဝင်ပွောငျးလဲ, နှင့် neurochemical စနစ်များ12-15။ စူးရှသောနာတာရှည်, ဒါပေမယ့်မပေးသဖြင့်လူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်း၏ပုံမှန်, လက္ခဏာကုသမှုကြောင့်လူသားတွေအတွက်စိတ်ကျရောဂါနှင့် PTSD ၏ရှုထောင့်ဆန်းစစ်ဘို့တန်ဖိုးရှိသောမော်ဒယ်စေသည်11,16။ နာတာရှည်ရှုံးနိမ့်ကြွက်များ၏တစ်ဦးကသိသိသာသာအချိုးအစား (~ 30%) ရှုံးနိမ့်များ၏အနုတ်လက္ခဏာအပြုအမူ sequelae အများစုရှောင်ရှား10, အားဖြင့်ဒဏ်ခံ၏စမ်းသပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်ခွင့်ပြု။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွင်းအများအပြားပရိုတိန်း (NAc) ၏သော induction တစ် key ကိုဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသ, ရှုံးနိမ့်အပြီးစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတှကျအရေးကြီးသောဖြစ်ပြထားပြီးနေစဉ်10,11,17,18တာဒီထက်ဒီဦးနှောက်ဒေသကကမကထပြုခဲ့ခံနိုင်ရည်၏မော်လီကျူးအခြေခံအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ΔFosBအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ, သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအများအပြားအမျိုးအစားများအားဖြင့် NAc အတွက်သွေးဆောင်တစ် Fos မိသားစုကူးယူအချက်ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်း19-21.
C57BL / 6J အထီးကြွက်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဆယ်ရက်ဆက်တိုက်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်10,11, ပြီးတော့လူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်း၏အတိုင်းအတာပေါ်တွင်အခြေခံဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ခံပြည်သူများအတွက်သို့ကွဲကွာ (သင်္ဘောသဖန်း။ 1a), အရာတော်တော်များများသည်အခြားစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်10။ ကျနော်တို့ (နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် NAc အတွက် immunohistochemistry ဖြင့်တိုင်းတာΔFosBတစ်ခုတိုးတွေ့သင်္ဘောသဖန်း။ 1b, c ကို), ဒဏ်ခံနှစ်ဦးစလုံး core ကိုအတွက်ΔFosB၏အကြီးမြတ်ဆုံးသော induction ဖေါ်ပြခြင်းကြွက်များနှင့် shell ကို NAc ငျဒသေ (နဲ့အတူသင်္ဘောသဖန်း။ 1b, c ကို) ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် osFosB နှင့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအဆင့် (r = 0.01, NAc shell; r = 0.80, NAc core; r = 0.85, NAc core) အကြားအားကြီးသော (p <0.86) ဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် osFosB induction ၏ဒီဂရီ NAc သည်တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် vs. အဓိကနှင့် shell ခွဲများပါ ၀ င်သော NAc ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို Western blot analysis သည်ကြံ့ခိုင်သောကြွက်များတွင်သာ inFosB induction ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 1).
လူမှုရေးရှုံးနိမ့်သဖြင့် NAc အတွက်ΔFosBသော induction ခံနိုင်ရည် mediates
ΔFosBသော induction ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ကအထူးသဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ NAc နှင့် dorsal striatum အတွက် inducibly ΔFosB overexpress ကြောင်း bitransgenic ကြွက်တွေကိုအသုံးပြု22။ ဤကြွက် (လူမှုရေးရှုံးနိမ့်လေးသို့မဟုတ်ဆယ်ရက်အပြီးလူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်လျှော့ချ propensity ပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 1d), အားဖြင့်ΔFosBလူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်နေတဲ့အကာအကွယ်အရေးယူပြုပြင်ကြောင်းအကြံပြု။ ပြောင်းပြန်ကျနော်တို့ inducibly ΔcJun, ΔFosBလှုပ်ရှားမှု antagonizes တစ် transcriptionally မလှုပ်မရှားနေရာများအစားထိုးလိုက် cJun Mutant overexpress ကြောင်း bitransgenic ကြွက်တွေကိုအသုံးပြု23,24။ (ΔFosB overexpressing ကြွက်မှမတူဘဲ, ΔcJun overexpressing ကြွက်ထိန်းချုပ်မှု littermates ထက်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဖို့ပိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးရှုံးနိမ့်၏4ရက်ပေါင်းအောက်ပါအကျယ်ချဲ့ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူကိုပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 1e) ။ အဆိုပါΔcJunကြွက်လည်းနှစ်ဦးစလုံးတိုးမြှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူ (အဖြစ်အနက်တစ်ဦးကိုတနေ့အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအဖြစ်လျှော့ချ sucrose preference ကိုတိုးမြှင် immobility ပြနောက်ဆက်တွဲပုံ။ 2a, ခ) ။ သို့သော်ΔFosBသို့မဟုတ်ΔcJun overexpression (locomotor လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများစွာကိုအခြေခံအစီအမံပြောင်းလဲပစ်ဘူးနောက်ဆက်တွဲပုံ။ 2c-, f) ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက် NAc နှင့် dorsal striatum အတွက်လျှော့ချΔFosBလှုပ်ရှားမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း "အဖြစ်ရည်ညွှန်းအပြုသဘော, သပ္ပါယ်တုံ့ပြန်မှု, လျော့နည်းစေကြောင်းအကြံပြု7"နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုရန်။
လျှော့ချ NAc အတွက်ΔFosBစိတ်ဖိစီးမှုလွယ်ကူစွာထိခိုက်အားပေးအားမြှောက်
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ΔFosBများ၏အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များသို့ထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့ရန်, ငါတို့ကြွက်များတွင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောမူမမှန် induces သောလူကြီးစဉ်အတွင်းလူမှုရေးအထီးကျန်တဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအသုံးပြုသွားမည်25 နှင့်လက်တွေ့စိတ်ကျရောဂါများအတွက်အဓိကအန္တရာယ်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့လူမှုရေးအရအထီးကျန်ကြွက်၏ NAc (ထဲမှာΔFosBအဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့လေ့လာတွေ့ရှိသင်္ဘောသဖန်း။ 2a, ခ) ။ ငါတို့သည်လည်းအထီးကျန်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဖို့ပိုအားနည်းချက်သိသိသာသာကြွက်ပြန်ဆိုကြောင်းတွေ့ရှိရ, ဤအထီးကျန်မှုတွေ-သွေးဆောင်အားနည်းချက် viral NAc (များတွင်ရွေးချယ်ΔFosB overexpressing နေဖြင့်လုံးဝပြောင်းပြန်ခဲ့သင်္ဘောသဖန်း။ 2c) ။ ပြောင်းပြန် NAc အတွက်ΔFosB function ကို၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, ΔJunD၏ဗိုင်းရပ်စ် overexpression အသုံးပြုပုံအုပ်စုတစ်စု-သျောထိန်းချုပ်ကြွက် (လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ရာထူးတိုးသင်္ဘောသဖန်း။ 2c) ။ ΔJunD, ΔcJunကဲ့သို့ΔFosBတစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ်ရန် (အဖြစ်ပြုမူတစ်ခု N-terminal ကိုခြင်းကို Mutant ဖြစ်ပါသည်နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 3)23။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်များကိုတိုက်ရိုက်စိတ်ဖိစီးမှုအားနည်းချက်အတွက် NAc အတွက်ΔFosB၏ Basal အဆင့်ဆင့် ဆက်စပ်. အ။
ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာစေရန်, ΔFosBအဆင့်ဆင့်စိတ်ဓာတ်လူနာထံမှရရှိသော postmortem လူ့ NAc နမူနာများနှင့်ကျယ်ပြန့်လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ (စိတ်ဓာတ်ကျလူနာΔFosBအဆင့်ဆင့်အတွက် ~ 50% လျော့နည်းသွားတွေ့ရှိခဲ့သင်္ဘောသဖန်း။ 2d), လူ့စိတ်ကျရောဂါအတွက်ΔFosBများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ supporting ။ အဆိုပါစိတ်ဓာတ်ကျသညျလူသားတို့ (သေခြင်းတရား၏သူတို့ရဲ့အချိန်တွင်မည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ချွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနောက်ဆက်တွဲဇယား 1), နှင့်ကျွန်တော်ΔFosBအဆင့်ဆင့်နှင့်လက္ခဏာထိတွေ့မှုများအကြားအဘယ်သူမျှမဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လက္ခဏာကုသမှု mouse ကို NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်တိုးပွါးသောငါတို့လေ့လာရေး (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ၏အလငျး၌ဤတွေ့ရှိချက် NAc အတွက်ΔFosBသွေးဆောင်ဖို့ပျက်ကွက်လူသားများတွင်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းများအတွက်အရေးပါသောပစ်မှတ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
NAc အတွက်ΔFosBလက္ခဏာအရေးယူ mediates
နာတာရှည်လက္ခဏာကုသမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွင်တွေ့မြင်ရှုံးနိမ့်-သွေးဆောင်လူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းနောက်ကြောင်းပြန်11။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည် NAc အတွက်ΔFosBသော induction ခံနိုင်ရည်များအတွက်ပေမယ်အဖြစ်ကောင်းစွာလက္ခဏာအရေးယူဘို့မသာတဲ့ယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ 20 နေ့ရက်ကာလအဘို့ fluoxetine နဲ့ကုသ non-ရှုံးထိန်းချုပ်မှုကြွက် (လူမှုရေးအပြုအမူမပွောငျးလဲထင်ရှားပေမယ့် NAc shell ကိုအတွက်ΔFosBတစ်ခုစုဆောင်းခြင်းပြသင်္ဘောသဖန်း။ 3a, ခ) နှင့် core ကို (နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 4) ။ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်၏ Fluoxetine ကုသမှု (သူတို့ရဲ့လူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းပြောင်းပြန်သင်္ဘောသဖန်း။ 3aNAc အတွက်), ယခင်ကအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, အဖြစ်ထပ်မံတိုးမြှင်ΔFosBအဆင့်ဆင့် (သင်္ဘောသဖန်း။ 3b, နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 4).
NAc အတွက်ΔFosBသော induction fluoxetine ၏လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှု mediates
တိုက်ရိုက် fluoxetine များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောΔFosBသော induction များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ viral ယခင်ကရှုံးနိမ့်ကြွက်၏ NAc အတွက် (ကထိန်းချုပ်မှုကဲ့သို့) တစ်ဦးတည်းΔJunDသို့မဟုတ် GFP overexpressed ။ အုပ်စုတိုင်းအတွက်ကြွက်၏ထက်ဝက်ထို့နောက် fluoxetine သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူသုံးနောက်ထပ်ရက်သတ္တပတ်ကုသခံခဲ့ရသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း NAc အတွက် GFP overexpressing ကြွက်၏ fluoxetine ကုသမှုနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်သဖြင့်သွေးဆောင်လူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းတစ်ဦးမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပြသသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ΔJunD၏ overexpression (fluoxetine ၏ဤကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားသင်္ဘောသဖန်း။ 3c), NAc အတွက်ΔFosBသော induction လက္ခဏာအရေးယူဘို့လိုအပ်ပါသည်သောအယူအဆ supporting ။ ကြွက်များတွင်အပြင်ΔFosB၏, ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression NAc (ထိုအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှု၏နေ့2အပေါ် immobility ၏လျော့နည်းသွားအချိန်အားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်သိသာထင်ရှားသောလက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက်ထုတ်လုပ်နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 5a) ။ ဒီစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းအပြုအမူများထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ရေကူးခြင်းနှင့်တောင်တက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ΔFosB-သွေးဆောင်တိုးထင်ရှားနောက်ဆက်တွဲပုံ။ 5b-ဃ), serotonergic မြားတှငျပွောငျးလဲနှင့် noradrenergic ယန္တရားများနှင့်ဆက်စပ်သော features တွေ26။ စိတ်ဝင်စားစရာ NAc အတွက်ΔFosB overexpressing ကြွက်များကိုတွေ့မြင် (ကလိုလားတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်အနက်, အပြင်စမ်းသပ်မှု၏ပထမနေ့၌ immobility အချိန်လျော့နည်းသွားပြသ အွန်လိုင်းနည်းလမ်းများ နှင့် နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 5e-ဇ).
NAc အတွက် AMPA အဲဒီ receptor စည်းမျဉ်းခံနိုင်ရည် mediates
ΔFosB NAc အတွက်မြောက်မြားစွာမျိုးဗီဇ၏ကူးယူထိန်းညှိ24,27။ တဦးတည်းထူထောင်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇဟာ AMPA အချိုမှု receptor subunit GluR2 ဖြစ်ပါသည်: NAc အတွက်ΔFosB overexpressing ကြွက်ကတခြားအချိုမှု receptor subunits မသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ GluR2 ၏အဆင့်ဆင့်သို့ခြီးမွှောကျပါပြီ22။ NAc အတွက် GluR2 ၏ဤရွေးချယ် upregulation တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး၏တိုးမြှင့်နှင့်သဘာဆုလာဘ်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်22,28။ GluR2 ၏မော်ဂျူအဖြစ်ကောင်းစွာΔFosBရဲ့လိုလားသူခံနိုင်ရည်အရေးယူမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်သောဖြစ်နိုင်ခြေဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် NAc အတွက် GluR2 စကားရပ်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ခံကြွက်တိုးလာ GluR2 အဆင့်ဆင့်ပြသနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက် (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ GluR2 အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 4a) ။ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေမှာ GluR2 စကားရပ်များ၏ဖိနှိပ်မှုအခြေခံသည့်ယန္တရားမသိရသေးပေမယ့်ကျနော်တို့၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့် GluR2 ကမကထမှΔFosB၏စည်းနှောင်တိုးမြှင့်ထားကြောင်းကိုတွေ့သောကြောင့်, ဒဏ်ခံကြွက်တွင်တွေ့မြင် GluR2 ၏ induction, အ GluR2 ဗီဇအပေါ်ΔFosB၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရောင်ပြန်ဟပ်ပုံ chromatin immunoprecipitative (chip) (သင်္ဘောသဖန်း။ 4b), နှင့်အရေအတွက် PCR (qPCR) (ဒဏ်ခံကြွက်၏ NAc အတွက် GluR2 mRNA အဆင့်ဆင့်၏စဉ်ဆက်မပြတ် induction ထင်ရှားသင်္ဘောသဖန်း။ 4c), အရာΔFosB၏စဉ်ဆက်မပြတ် induction မှုနဲ့အပြိုင်။ စိတ်ဝင်စားစရာ GluR1 လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်အတိုက်အခံစညျးမဉျြးစညျးကမျးခဲ့: ငါတို့သည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေမှာတိုးလာစကားရပ်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဒဏ်ခံကြွက်များတွင်စကားရပ်လျော့နည်းသွား (သင်္ဘောသဖန်း။ 4a) ။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမသက်ဆိုင်တဲ့ပွောငျးလဲ Post-Translational ယန္တရားများအကြံပြုခြင်း, GluR1 mRNA စကားရပ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Non-ရှုံးနိမ့်ကြွက်များ၏နာတာရှည် fluoxetine ကုသမှု (NAc အတွက် GluR2 အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်သင်္ဘောသဖန်း။ 4dထင်ရှားစိတ်ဓာတ်လူနာထံမှလူ့ postmortem NAc တစ်ရှူး) နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ GluR2 အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့သင်္ဘောသဖန်း။ 4e) ။ GluR1 အဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲမရှိပါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 4e).
NAc အတွက် GluR2 ၏ Pro ကို-ခံနိုင်ရည်, လက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက်
GluR2 ၏ရှေ့မှောက်တွင် AMPA receptors အပေါ်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်: GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors Ca များမှာ2+-permeable နှင့် GluR2 ပါဝင်သော receptors နှိုင်းယှဉ်, သာ. ကြီးမြတ်အဲဒီ receptor conduction နှင့်ခိုင်ခံ့သောအတွင်းပိုင်း rectifying ရေစီးကြောင်းဖော်ပြရန်29။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထဲကဓာတုပစ်စညျးရလဒ်များကိုဖြည့်ရန်, ထိုကြောင့်ငါတို့သည် Non-ရှုံးနိမ့်ကြွက်၏ NAc နှင့်ဒဏ်ခံနှင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်နှစ်ဦးစလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်အလတ်စား spiny အာရုံခံတစ်ခုလုံး-ဆဲလ်ဗို့-ညှပ်အသံသွင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ AMPA-mediated ၏လက်ရှိ-ဗို့ဆက်ဆံရေး (excitatory postsynaptic ရေစီးကြောင်း (EPSCs) ကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေမှာချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွင်းသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ထင်ရှား evokedသင်္ဘောသဖန်း။ 5a-c ကို) GluR1 ၏တိုးမြှင့်အချိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီထိန်းချုပ်မှု, နှိုင်းယှဉ်: GluR2 ဤအခြေအနေများအောက်တွင်မြင်ကြ။ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသောဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း၏ဒီဂရီ variable ကိုပေမဲ့ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဒဏ်ခံအုပ်စုများနှစ်ဦးစလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်အလွန်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုလေ့လာသည်။ ဒီတွေ့ရှိချက်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေကနေအားလုံးဆဲလ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း၏ဒီဂရီထိန်းချုပ်မှုဆဲလ်များအတွက်မြင်ပြီဆိုလိုတန်ဖိုးကိုထက်ကျော်လွန်သောအချက်အားဖြင့်ညွှန်ပြနေသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့်သွယ်ဝိုက် (လူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိသင်္ဘောသဖန်း။ 5d), အ GluR1 ပြောင်းလဲမှုများကြောင်းအကြံပြု: GluR2 အချိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒီအပြုအမူကိုမောင်းစေနိုင်သည်။ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေမှာ GluR2-ချို့တဲ့ receptors ၏ သာ. ပျံ့နှံ့အတည်ပြုဖို့, ငါတို့သည် 1-naphtylacetylsperimine (NASPM) နဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေကနေ GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors တစ်ဦးရွေးချယ် blocker ချပ်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီး။ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသောအာရုံခံအတွက် Evoked EPSCs (သင်္ဘောသဖန်း။ 5e-, f) သိသိသာသာ GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors ထိန်းချုပ်မှုထက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေမှာ glutamatergic ဂီယာမှသိသိသာသာကိုပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းဆန္ဒပြ, NASPM လျှော့ချခဲ့သည်။ မှတ်စု၏, ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေမှာ NASPM ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာပိုကြီးတဲ့ပြောင်းလဲမှုစဉ်းစားဟောကိန်းထုတ်ထက်လျော့နည်းခဲ့သည်။ ဒါကမတူကွဲပြား, သို့သော်, မကြုံစဖူးမဖြစ်30 နှင့် (ဆွေးနွေးချက်ကိုကြည့်ပါ) GluR2 နှငျ့ပတျသကျသော post ကို-translation ပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ပရိုတိန်း-ပရိုတိန်း interaction ကကနေရလဒ်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး NASPM ထိတွေ့မှု၏အတိုင်းအတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိအတွင်းချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုး (ဒဏ်ခံကြွက်တွေမှာပျက်ကွက်ခဲ့သင်္ဘောသဖန်း။ 5a-ဃ), ပုလေ့လာ GluR1 အတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဤအခြေအနေများအောက်တွင် GluR2 အတွက်တိုးနှင့်ကိုက်ညီ။ သို့သော်ကျနော်တို့ (ဆွေးနွေးချက်ကိုကြည့်ပါ) ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒဏ်ခံကြွက်များတွင်အတွင်းချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ကျဆင်းခြင်းမမြင်ရ။
AMPA အဲဒီ receptor ဖွဲ့စည်းမှု differential ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ခံကြွက်တွေမှာစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်
NAc အတွက် AMPA အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏စိတ်မကျဆေး Antidepressants ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ
ဤရွေ့ကားဒေတာ AMPA အဲဒီ receptor function ကို (တိုးလာ GluR1: GluR2 အချိုး) တိုးမြှင့်ကြောင်းအကြံပြု AMPA function ကိုလျော့နည်းသွားသော်လည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်၏ NAc အတွက်လူမှုရေး, ရှောင်ရှားခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက် (GluR1 လျော့နည်းသွား: GluR2 အချိုး) ခံနိုင်ရည်စေတယ်။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ကိုချက်ချင်းမတိုင်မီလူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းစမ်းသပ်မှုမှရှုံးနိမ့်ကြွက်များ၏ NAc သို့တိုက်ရိုက် AMPA အဲဒီ receptor ရန် NBQX ထုံမွှန်း။ NBQX (လူမှုရေးအပြန်အလှန်အချိန်တိုးမြှင့်သင်္ဘောသဖန်း။ 4f), အ NAc မှအစာရှောင်ခြင်း excitatory input ကို၏ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြနာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု၏ဤ deleterious အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဆန့်ကျင်။ NBQX (ယေဘုယျ locomotor လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်ဘူးနောက်ဆက်တွဲပုံ။ 6) ။ ကြွက် re-စမ်းသပ်ပြီးအဖြစ်အပြင်, လူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းအပေါ် NBQX ၏တစ်ခုတည်းပြုတ်ရည်၏လက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက်တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ထပ်မံတိုးမြှင့်ပြသကြာရှည်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့လာမယ့်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်၏ NAc အတွက်ရွေးချယ် GluR2 overexpressed ။ GluR2 စကားရပ်လုံးဝနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်သဖြင့်သွေးဆောင်လူမှုရှောင်ရှားခြင်းပြောင်းပြန် (သင်္ဘောသဖန်း။ 4g), NAc အတွက် GluR2 upregulation ခံနိုင်ရည်၏အဓိကယန္တရားသောအမြင် supporting ။ စိတ်ဝင်စားစရာ GluR2 overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်မှာအနည်းဆုံး 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့တည်မြဲမှုသင်္ဘောသဖန်း။ 4g) ဗိုင်းရပ်စ်-mediated GluR2 စကားရပ်လုံးဝ dissipated ထားပါတယ်အခါ။ ပြောင်းပြန်ဒဏ်ခံကြွက်တွေထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လေ့လာမှုများအတွက် GluR2 ပုံနဲ့ဆင်တူတယ် GluR2, GluR1Q ၏တည်းဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲဗားရှင်း၏ overexpression, (လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဖို့ကြွက်တွေကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြန်ဆိုသင်္ဘောသဖန်း 4g), NAc အတွက် AMPA အဲဒီ receptor function ကိုတိုးမြှင့်သောအမြင်ထောက်ပံ့လွယ်ကူစွာထိခိုက်စေတယ်။
ခံနိုင်ရည်အထောက်အကူပြုကြောင်းနောက်ထပ်ΔFosBပစ်မှတ်မျိုးဗီဇကိုသိရှိနိုင်ဖို့, ငါတို့ 57 နာရီဖြစ်ပေါ်နိုင် phenotype vs. တစ်ဒဏ်ခံပြသကြောင်းနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ΔFosB overexpressing bitransgenic ကြွက်များ၏ NAc မှ C6Bl / 48J ကြွက်မှရရှိသောခဲ့ဗီဇစကားရပ်ခင်းကျင်းဒေတာအစုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ10,24. သင်္ဘောသဖန်း။ 6a NAc တွင် cedFosB နှင့်ခံနိုင်ရည်အားဖြင့်သွေးဆောင်သောမျိုးရိုးဗီဇများအကြားသိသိသာသာ (> ၇၅%) ထပ်နေသည်။ ဤအမျိုးဗီဇများထဲမှ (စာရင်း နောက်ဆက်တွဲဇယား 2), ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးခံနိုင်ရည်နှင့်ΔFosB overexpression အပေါ်သို့ယင်း၏သော induction ၏ပြင်းအားအပေါ်အခြေခံပြီးနောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ SC1 များအတွက်ရွေးချယ်ထားကြသည်။ ထို့အပြင် 1 သို့မဟုတ် hevin -like Sparc (cysteine ​​ကြွယ်ဝအက်ဆစ်လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်ပရိုတိန်း,) အဖြစ်လူသိများ SC1, မြင့်မားက postsynaptic သိပ်သည်းဆအတွက် localizes နှင့် Synaptic အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်အဘယ်မှာရှိအရွယ်ရောက်သူဦးနှောက်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်း anti-ကော် matrix ကိုမော်လီကျူးဖြစ်ပါသည် plasticity31။ တိုက်ရိုက်ခံနိုင်ရည်အတွက် SC1 ၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအကဲဖြတ်ရန်, ငါတို့ viral ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်၏ NAc အတွက် SC1 overexpressed ။ SC1 သိသိသာသာ (နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်သဖြင့်သွေးဆောင်လူမှုရှောင်ရှားခြင်းပြောင်းပြန်သင်္ဘောသဖန်း။ 6b) ။ SC1 overexpression ကိုလည်း (ထိုကြွက်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှု၏နေ့2တခုတခုအပေါ်မှာလက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်သင်္ဘောသဖန်း။ 6c နှင့် နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 7a-c ကို), ဒါပေမယ့် Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်-related အပြုအမူတွေကိုအဘယ်သူမျှမရှိခဲ့သည် (နောက်ဆက်တွဲပုံ။ 7d-ဂရမ်) ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့စိတ်ဓာတ်လူနာ (ထံမှလူ့ postmortem NAc တစ်ရှူးများတွင်လျော့နည်းသွား SC1 အဆင့်ဆင့်အဘို့ခိုင်ခံ့လမ်းကြောင်းသစ်ရှာတွေ့သင်္ဘောသဖန်း။ 6d).
NAc အတွက် SC1 ၏ Pro ကို-ခံနိုင်ရည်, လက္ခဏာတူသောဆိုးကျိုးများ
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှဒဏ်ခံတုံ့ပြန်မှုအခြေခံနှင့်နာတာရှည်လက္ခဏာကုသမှု၏ကုထုံးသက်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုကြောင်း NAc ၏အလယ်အလတ် spiny အာရုံခံအတွက်ဖြစ်ပေါ်မော်လီကျူးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားသည်။ ကျနော်တို့ NAc အတွက်ΔFosB၏ Basal အဆင့်ဆင့်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုမှတစ်ဦးချင်း၏ကနဦးအားနည်းချက်ဆုံးဖြတ်ရန်ကြောင်းပြခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ΔFosBသော induction ၏ဒီဂရီကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုမှဒဏ်ခံတုံ့ပြန်မှု vs. ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဆုံးဖြတ်သည်သော။ ကျနော်တို့နာတာရှည် fluoxetine အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သွေးဆောင်အပြုအမူမူမမှန်များ၏အောင်မြင်သောမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ΔFosB၏မူးယစ်ဆေးရဲ့ induction လိုအပ်သည်ထပ်မံပြသပါ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် NAc အတွက်ΔFosBသော induction ခံနိုင်ရည်နှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောယန္တရားနှစ်ဦးစလုံးကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဓာတ်လူသား NAc အတွက်ΔFosB၏အောက်ခြေအဆင့်များ၏တွေ့ရှိချက်လက်တွေ့စိတ်ကျရောဂါမှ mouse ကိုမော်ဒယ်များတွင်ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၏ဆက်စပ်မှုထောက်ခံပါတယ်။ ΔFosBမြောက်မြားစွာပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ inducing သို့မဟုတ်ဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့် NAc function ကိုထိန်းညှိ24,27။ ကျွန်တော်တို့သည်ထို AMPA အဲဒီ receptor subunit GluR2 နှင့် SC1 တစ်ခု extracellular matrix ကိုပရိုတိန်းသည်၎င်း၏ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇနှစ်ခုခွဲခြားသတ်မှတ်နှင့်တိုက်ရိုက်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်ဖြန်ဖြေမှာသူတို့ကို ဆက်စပ်. အ။
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခြေအနေတွင်ΔFosBများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောလိုလားသူခံနိုင်ရည်အခန်းကဏ္ဍအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, လိင်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်မှတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိအတွက်ΔFosBရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏အလငျး၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်19။ ΔFosBမူးယစ်ဆေးနှင့်သဘာဆုလာဘ်များက NAc အတွက်သွေးဆောင်, ဤလှုံ့ဆော်မှုဖို့ကြိုးတုံ့ပြန်မှုတိုးပွါးနေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းအချို့ရှုထောင့်တစ်ဖျန်ဖြေအဖြစ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ်များအတွက်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ရှုပ်ထွေးစိတ်ခံစားမှုအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်း၌ဤပရိုတိန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့အခြေခံကျကျအသစ်ကထိုးထွင်းသိမြင်သည်။ သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်, ΔFosBရှိသမျှသည်အခြားသောဦးနှောက်ဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် NAc အတွက်အမြင့်မားဆုံးအဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်19။ ကျနော်တို့ NAc အတွက်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်တစ်ဦးချင်းရဲ့လှုံ့ဆျောမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရေးနှင့်ထင်ရှားတဲ့ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ orienting အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်း hypothesize ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအထီးကျန်နေစဉ်အတွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆွ၏ဖယ်ရှားရေးကျနော်တို့ကဒီမှာပြသအဖြစ်, သူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှု impairing နှင့်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တိုးမြှင့်, mouse ကို NAc အတွက်ΔFosB၏ Basal အဆင့်ဆင့်လျော့ကျစေပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်လူနာ postmortem NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာကျဆင်းခြင်းသည်ဤအယူအဆနှင့်အညီဖြစ်ပြီး, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူအတော်များများတွင်တွေ့မြင်အဆိုပါချို့ယွင်းလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်အတွက်ΔFosBတစ်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုထားသည်။ ပြောင်းပြန်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် NAc အတွက်ΔFosBသွေးဆောင်နိုင်စွမ်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်စိတ်ဖိစီးမှုလူသားများအတွက်ခံနိုင်ရည်၏လက်ရှိအမြင်များနှင့်ကိုက်ညီနေတဲ့အယူအဆကြားမှလှုံ့ဆော်မှုနှင့်သဘာဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်တစ်ဦးချင်းဖွ1,2။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်သဘာဝကဆုလာဘ်နှင့်အတူမြင်ကြကြောင်းထက်ပြင်းအားအတွက်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်သည်အရာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့် NAc အတွက်ΔFosB၏ induction, hypothesize19ခိုင်မာမူးယစ်စိတ်ကြွဆေးဆီသို့အကျိုးကို circuitry ယိုယွင်းတဲ့လမ်းအတွက်ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်တဲ့ရောဂါဗေဒဘွဲ့အတွက်ရလဒ်တွေကိုi.
ရှင်းနေသည်မှာ, ဤအယူအဆ၏တိကျသော features တွေထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည်။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ် fluoxetine အားဖြင့် NAc အတွက်ΔFosB၏ induction မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စွဲလမ်း၏ comorbidity ကောင်းစွာသောလူသားမြား၌တည်သည်, အလွဲသုံးစားမှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးအကြားလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ကြွက်များတွင်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး32-34။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေး, သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော syndrome ဖြစ်ကြပြီးစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူအများစုစွဲနှင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး အပြန်အလှန်အားဖြင့်။ ထိုမှတပါး, fluoxetine တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမထားဘူး, မကြောင့်လည်းစိတ်ဓာတ်ကျမဟုတ်သောစွဲထဲမှာစွဲ၏ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရှုပ်ထွေးနက်နဲအတူတသမတ်တည်း, လူမှုရှုံးနိမ့်ပါရာဒိုင်းပြပွဲများတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်မဟုတ်ဒဏ်ခံကြွက်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ကြောင်းကျနော်တို့တွေ့ကြပြီ10။ ဒါကကိုယ့်တဦးတည်းသာဓကအဖြစ်, BDNF, NAc အတွက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်, ဒဏ်ခံမဟုတ်, ကြွက်များတွင်သွေးဆောင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ယန္တရားများပိုကောင်းစေပါတယ်သော, NAc နှင့်အခြားနေရာများတွင်သွေးဆောင်များစွာသောအခြား adaptor ခံအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်များ၏တိုးမြှင့်အားနည်းချက်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုမယ်လို့မြင် 10.
စိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်မြှင့်တင်နေချိန်တွင်ΔFosB, စွဲလမ်း၏ရှုထောင့်ကိုအားပေးအားမြှောက်သောအနက်, စိတ်ကျရောဂါမော်ဒယ်များ vs. စွဲအတွက် NAc အတွက်ပေးထားသောပရိုတိန်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိရှုပ်ထွေးဆက်ဆံရေးပေးထားအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ များစွာသောအခြားပရိုတိန်းသည်ဤအခြေအနေနှစ်ခုအောက်တွင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများကွိုးစားအားထုစဉ်တချို့ကပရိုတိန်း (ဥပမာ BDNF), အလွဲသုံးစားမှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုမှမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်: ဥပမာ, NAc အတွက် CREB တစ်လိုလားသူစိတ်ကျရောဂါ phenotype ထုတ်လုပ်သော်လည်း, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်မှု blunts မြင် 4,10.
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ရှုပ်ထွေးစိတ်ခံစားမှုအပြုအမူများ၏မော်လီကျူးကျောထောက်နောက်ခံပြု delineating အတွက်နောက်ထပ်သုတေသနဘို့လိုအပ်ကြောင်း, ဒီလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်အမူအကျင့်စမ်းသပ်မှု၏အကျယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောအကွာအဝေးအလုပ်သမားများ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး။ ရလဒ်ကိုလည်းတစ်ဦးတည်းΔFosBက NAc-မှီခိုဆုလာဘ်ယန္တရားများတစ် key ကိုထိန်းညှိသည်နှင့်အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးအခွအေန၏အချို့သောကဏ္ဍများဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါသည်, အစား, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စွဲလမ်း၏အပြည့်အဝဖြစ်စဉ်များကိုရှင်းပြမပေးနိုငျသညျ, မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအဖြစ်, ထိုညွှန်ပြ.
သို့သော်ဤဆွေးနွေးမှု၏အဓိကအသိပေးချက်ΔFosBစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စွဲမော်ဒယ်များအတွက်သွေးဆောင်သော NAc အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဆဲလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်သဘာဆုလာဘ်၏မူးယစ်ဆေးဝါးအဓိကအား D ကိုဖော်ပြကြောင်း NAc အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ subclass အတွက်ΔFosBသွေးဆောင်1 dopamine receptors19,22, စိတ်ဖိစီးမှု: D အတွင်းအကြမ်းအားဖြင့်ညီတူညီမျှΔFosB induces စဉ်1 နဲ့ D2 အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံ20။ ဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်ΔFosBများ၏စွမ်းရည်ကို: D များအတွက်ပြသခဲ့ပြီးကတည်းကဒီအ differential ကို induction, သိသိသာသာအလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များရှိသည်နိုင်1 သာလူတန်းစားတွင် neuron19.
ΔFosBရဲ့လိုလားသူခံနိုင်ရည်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ပစ်မှတ်ဗီဇအဖြစ် GluR2 ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းသည်ဤထည့်သွင်းစဉ်းစားအပေါ်အချို့သောအလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ။ ကျနော်တို့ကြွက်များတွင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်, လူ့စိတ်ကျရောဂါသည် GluR1 တစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောပြသ: အချိုမှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်တိုးချဲ့အလတ်စား spiny အာရုံခံဆဲလျစိတ်လှုပ်ရှားအကြံပြုထားတဲ့ NAc အတွက် GluR2 အချိုး,.
အဆိုပါ NAc glutamatergic အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများထံမှသွင်းအားစု, အထူးသဖြင့်, prefrontal cortex, amygdala နှင့် hippocampus အားလက်ခံတွေ့ဆုံ35။ ထိုသို့သော glutamatergic input ကိုကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု၏ valence နှင့် saliency modulates နှင့်ဖြင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ထား36-38။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ NAc စိတ်လှုပ်ရှားစိတ်ဖိစီးမှုအားနည်းချက်မြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါတိုးမြှင့်သောငါတို့အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ အတင်းအကျပ်ရေကူးစိတ်ဖိစီးမှု NAc အတွက် Synaptic အစှမျးသတ်တိနှငျ့ AMPA အဲဒီ receptor function ကိုတိုးပွားစေ39, NAc သို့အချိုမှုပြုတ်ရည်ဟာအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလိုလားသူစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ရေကူးအပြုအမူလျော့ကျစေပါတယ်စဉ်40။ ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, တိုးမြှင့ NAc ပစ်ခတ်ရန်အများအပြားတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ဆန္ဒရှိပြည်နယ်များ encodes41။ NAc လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ALTER အဓိကစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိပြီ42 နှင့်အထူးတပ်ဖွဲ့များအတွက်စစ်သား Pre-ရွေးချယ်ပြင်းထန်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏မျက်နှာများတွင်ဒဏ်ခံဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြား43။ အလားတူပင် subgenual cingulate cortex သို့မဟုတ် NAc ၏နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ (subgenual cingulate cortex ၏အဓိကပစ်မှတ်) တို့စိတ်ကြွဆေးဦးနှောက်ဒေသ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လျှော့ချရန်စဉ်းစားတစ်ဦးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု, ကုသမှု-ဆန့်ကျင်ဘက်လူနာအတွက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေလျော့ချ3,44.
စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ်များကဲ့သို့ပင် NAc အတွက်တိုးမြှင့် glutamatergic တုန့်ပြန်လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး30,45-47။ ဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors တစ်ခုတိုးပါဝင်သည်30,47ကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုလွယ်ကူစွာထိခိုက်ဒီမှာသတင်းပို့အရာကိုဆင်တူ။ အတူတကွဤလေ့လာတွေ့ရှိချက် NAc အတွက်တိုးမြှင့် glutamatergic ဂီယာစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှစ်ဦးစလုံးမှအားနည်းချက်အားပေးအားမြှောက်သောစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းလဲမှု, အကြောင်း, တစ်ဦးလျှော့ GluR1 ဖြစ်ပါသည်: ဒဏ်ခံကြွက်၏ NAc အတွက်ဒီမှာပြ GluR2 အချိုး, လျှော့ချ glutamatergic function ကိုနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏ deleterious သက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤသည် NAc အတွက်ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုပိုကောင်းစေပါတယ်, GluR2 လှုပ်ရှားမှုတိုးလာကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်, ဒါမှမဟုတ်လျှော့ချ GluR1 လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်28,37,48။ အလားတူ NAc အတွက် GluR2 စကားရပ်သွေးဆောင် fluoxetine များ၏စွမ်းရည်ကိုကဒီဦးနှောက်ဒေသအချိုမှု innervation လည်းလက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါလျှော့ချသောဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့သည် NAc အတွင်း AMPA အဲဒီ receptor function ကို၏တားစီးနေတဲ့အစွမ်းထက်နှင့်အသက်ရှည်လက္ခဏာတူသောတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြတယ်။
ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်၏ NAc အတွက် AMPA အဲဒီ receptor စကားရပ်ထဲမှာကျနော်တို့ကိုသရုပ်ပြပြောင်းလဲမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့ electrophysiological လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေစဉ်, ခံနိုင်ရည်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာပြောင်းလဲမှုများပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒဏ်ခံကြွက်၏ NAc အတွက်လျော့နည်းသွား GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors များအတွက် electrophysiological သက်သေအထောက်အထားရယူခဲ့ပါဘူး။ ငါတို့သည်ဤလိုက်လျောညီထွေလွယ်ကူစွာထိခိုက်များ၌တွေ့မြင်အလွန်အကျွံ AMPA အဲဒီ receptor function ကို reverse လုံလောက်နေစဉ်ခံနိုင်ရည်အတွက် GluR2 ၏ΔFosB-mediated သော induction ရုံ glutamatergic ဂီယာနှင့်ထိခိုက်စေသည်ဟု NAc အတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအများအပြားအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်များထဲမှကြောင်း hypothesize ကြောင့်အသားတင်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းပါဘူး ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်။ အမှန်စင်စစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် NAc အတွက် glutamatergic ဂီယာ၏ရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်းထုတ်ဖေါ်။ ခံနိုင်ရည် vs. လွယ်ကူစွာထိခိုက်၌ဤဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ GluR1 စကားရပ်များတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းလဲမှုများ mRNA အဆင့်မှာမြင်မ mRNA အဆင့်မှာမြင်ကြလွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက် GluR2 ၏လျော့နည်းသွားအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်ကြသည်မဟုတ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုမော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်အတိုင်းဤသည်လည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကစားခြင်း, AMPA အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှုမြားတှငျပွောငျးလဲအပါအဝင် Post-Translational ပြုပြင်မွမ်းမံအတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်30,47.
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများက NAc အတွက် glutamatergic ဂီယာ၏ရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်း GluR1 ၏ induction ကဲ့သို့ခံနိုင်ရည် mediates သောΔFosBများအတွက်အခြားပစ်မှတ်ဗီဇအဖြစ် SC2 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ SC1 Synaptic plasticity ထိန်းညှိဖို့လူသိများသည်31။ ၎င်း၏ဆန့်ကျင်ကော်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ရလဒ်အဖြစ် NAc အတွက် SC1 သော induction ခံနိုင်ရည်များအတွက်အလွန်အရေးပါပေါ်လာကြောင်း glutamatergic synapses မှာ plasticity အတူလိုက်ပါသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုအလိုလိုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပေါ်ပေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မကြာသေးမီအထောက်အထား extracellular matrix ၏ဖယ်ရှားရေး AMPA receptors ၏ပျံ့နှံ့ဘို့ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်အားဖြင့် Synaptic plasticity အားပေးအားမြှောက်ကွောငျးဖျောပွသ49.
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို NAc အတွက်ΔFosBဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ခိုင်ခံ့သောအနှုတ်လက္ခဏာဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု counteracts ကြောင်း Synaptic plasticity တစ်ပုံစံ inducing နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏မျက်နှာကိုအတွက်ခံနိုင်ရည် mediates သိရပါအံ့။ တစ်ဦး scheme ကိုထောကျပံ့ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွေမှာမြင်သော NAc အတွက် GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors အတွက်တိုး, စွဲမော်ဒယ်များအတွက်တဏှာနှင့် relapse မြှင့်တင်ရန်ကြောင့်ကိုကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုပိုမိုဆိုးရွားပြခဲ့ကြ30,47။ ဆနျ့ကငျြ, ဒဏ်ခံကြွက်တွေမှာ glutamatergic သေံဒလြော့, GluR2 ၏တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် SC1 ၏ဖြစ်ကောင်းသော induction မှတဆင့် NAc အာရုံခံမျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေဖို့လျော့နည်းနိုင်ပါထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးရှုံးနိမ့်ပါရာဒိုင်းတစ်ဝတ္ထု mouse ကိုအဖြစ်အဓိကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု, ဆပ်နှင့်ဖြင့်ရည်မှန်းချက်ကို enable စေခြင်းငှါ, စိတ်ဖိစီးမှုကြားမှဆက်လက်အပြုအမူ -directed ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇသည် array အဖြစ်ကောင်းစွာ resilience မှပံ့ပိုးΔFosBအများအပြားထပ်တိုးပစ်မှတ်၏ဖွယ်ရှိပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှအပြုသဘောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တစ်ဦးချင်းရဲ့စွမ်းရည်အတွက်ΔFosBနှင့်၎င်း၏ပစ်မှတ်အားဖြင့်ကစားယင်းကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍအခြေခံကျကျဝတ္ထုလက္ခဏာကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်လမ်းသစ်တွေပေါ်ပေါက်။
ဤလုပ်ငန်းကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေအားဖြင့်၎င်း, AstraZeneca အတူသုတေသနမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ DRs ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆိုပါ SC1 cDNA ၏ရက်ရက်ရောရောဆုကြေးဇူးကိုအဘို့အ P. McKinnon နှင့်အိပ်ချ်စယ်။ ငါတို့သည်လည်းဗြဲဝင်္, DRs ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထောကျအကူဆွေးနွေးမှုနှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်မှတ်ချက်တွေအဘို့အ R. Oosting, အက်စ် Gautron နှင့်ဃ Vialou ။
စာရေးသူထောက်ပံ့ VV နှင့် EJN ခြုံငုံလေ့လာမှုဒီဇိုင်းများအတွက်တာဝန်ရှိရှိကြ၏။ QL နှင့် VV, ဒီဇိုင်းကောက်ယူနှင့် RNA နှင့် chip စမ်းသပ်ချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ AJ Robison ကောက်ယူ, ဒီဇိုင်းနှင့် electrophysiological လေ့လာမှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ HEC နှင့် VV အဆိုပါ NBQX pharmacological စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ QL, DMD, ELW နှင့် VV အဆိုပါ stereotaxic ခွဲစိတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ YNO အဆိုပါ HSV အားနည်းချက်ကိုသို့ SC1 cDNA ပုံတူမျိုးပွား။ YHO အဆိုပါ AP1 luciferase assay ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ QL, DMD, DW နှင့် VV လူမှုအထီးကျန်မှုတွေစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ VV, ELW နှင့် AJ Rush လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စမ်းသပ်မှုနှင့် immunohistochemical အရေအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ SI, QL, BW နှင့် VV ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ကြွက်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်အတင်းအဓမ္မရေကူးစမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ EM နှင့် RN ဗိုင်းရပ်စ်-transgenesis များအတွက်ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ စရဖ, VK နှင့် OB လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် VV လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဒေတာများကိုကျော်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်သည်။ စင်ကာပူဒေါ်လာနှင့် CAT လူ့ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာဦးနှောက်တစ်သျှူးဖြစ်သည်။ VV နှင့် EJN အခြားစာရေးဆရာများ၏အကူအညီနှင့်အတူစက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
စာရေးသူသတင်းအချက်အလက် ပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်နှင့်ခွင့်ပြုချက်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.nature.com/reprints.
အပိုဆောင်း နောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်အလက် မှာစက္ကူအွန်လိုင်းဗားရှင်းဆက်စပ်နေသည် www.nature.com/natureneuroscience/.
1 ။ McEwen BS ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေ၏ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် neurobiology: ဦးနှောက်၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ။ Physiol ဗျာ 2007; 87: 873-904 ။ [PubMed]
2 ။ ဖက်ဒရယ်တစ်ဦးက, Nestler EJ, Charney DS ။ Psychobiology နှင့်ခံနိုင်ရည်၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2009; 10: 446-457 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Ressler KJ, Mayberg HS ။ ခံစားချက်နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အာရုံကြောဆားကစ်ပစ်မှတ်ထား: ဓာတ်ခွဲခန်းကနေဆေးခန်းမှ။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1116-1124 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Krishnan V ကို, Nestler EJ ။ စိတ်ကျရောဂါ၏မော်လီကျူး neurobiology ။ သဘာဝ။ 2008; 455: 894-902 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ Yehuda R ကို, Flory JD, Southwick S က, Charney DS ။ စိတ်ဒဏ်ရာထိတွေ့အောက်ပါခံနိုင်ရည်နှင့်အားနည်းချက်၏ Translational လေ့လာမှုများများအတွက်အစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2006; 1071: 379-396 ။ [PubMed]
6 ။ Tornatzky W က, Miczek Ka ။ အကျဉ်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian rhythms ၏ရေရှည်ချို့ယွင်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 1993; 53: 983-993 ။ [PubMed]
7 ။ Koolhaas JM, Meerlo P ကို, De Boer SF, Strubbe JH, Bohus ခစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများ၏ယာယီဒိုင်းနမစ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1997; 21: 775-782 ။ [PubMed]
8 ။ de Kloet ER ။ ဟော်မုန်းနှင့်အလေးပေးဦးနှောက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004; 1018: 1-15 ။ [PubMed]
9 ။ Rygula R ကို, et al ။ ကြွက်များတွင် Anhedonia နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှု: နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2005; 162: 127-134 ။ [PubMed]
10 ။ et al Krishnan V ကို။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ခုခံရေးအခြေခံမော်လီကျူးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ cell ။ 2007; 131: 391-404 ။ [PubMed]
11 ။ Berton အို et al ။ လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအတွက် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းအတွက် BDNF ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2006; 311: 864-868 ။ [PubMed]
12 ။ Tidey JW, Miczek Ka ။ လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု: accumbens dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl) 1997; 130: 203-212 ။ [PubMed]
13 ။ Martinez M က, Calvo-Torrent တစ်ဦးက, က c-fos စကားရပ်နှင့်အတူကြွက်များတွင်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုမှဟားဘတ်ဂျေမြေပုံဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ စိတ်ဖိစီးမှု။ 2002; 5: 3-13 ။ [PubMed]
14 ။ Kollack-Walker က S ကိုဒွန်ကို C, Watson ဟာ SJ စူးရှသောသို့မဟုတ်နာတာရှည်ရှုံးနိမ့်ထိတွေ့အထီးဟမ်းစတား၏ neurocircuits အတွင်းက c-fos mRNA ၏ Akil အိပ်ချ် Differential စကားရပ်။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1999; 11: 547-559 ။ [PubMed]
15 ။ Becker ကနေ C, et al ။ ကြွက်များတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်၏မျှော်လင့်နေတဲ့မော်ဒယ်ထဲမှာ cholecystokinin ကဲ့သို့သောပစ္စည်း cortical extracellular အဆင့်ဆင့် Enhanced ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 262-269 ။ [PubMed]
16 ။ Rygula R ကို, Abumaria N ကို, Domenici အီး, Hiemke ကို C, ကြွက်များတွင်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုများက evoked အပြုအမူလိုငွေပြမှုအပေါ် fluoxetine ၏ Fuchs အီးအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2006; 174: 188-192 ။ [PubMed]
17 ။ Wilkinson ကို MB, et al ။ Imipramine ကုသမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါမော်ဒယ်များအတွက် mouse ကိုနျူကလိယ accumbens အလားတူ chromatin စည်းမျဉ်းပြ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 7820-7832 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ Covington သူ, 3rd, et al ။ histone deacetylase inhibitors ၏စိတ်မကျဆေး Antidepressants လုပ်ရပ်တွေကို။ J ကို neuroscience ။ 2009; 22: 11451-11460 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Nestler EJ ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ et al Perrotti LI ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 10594-10602 ။ [PubMed]
21 ။ Nikulina EM, Arrillaga -Romany အဘိဓါန်ငါ Miczek Ka, Hammer RP, ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် mesocorticolimbic အဆောက်အဦများအတွက် Jr Long-တည်တံ့အပြောင်းအလဲတချို့: ။ mu-opioid အဲဒီ receptor mRNA နှင့် FosB / DeltaFosB immunoreactivity အချိန်သင်တန်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2008; 27: 2272-2284 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ et al Kelz ကို MB ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999; 401: 272-276 ။ [PubMed]
23 ။ et al Peakman MC ။ Transgene ကြွက်တွေမှာက c-ဇွန်၏အလွှမ်းမိုးအနုတ်လက္ခဏာ Mutant ၏သွေးဆောင်, ဦးနှောက်ဒေသ-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 970: 73-86 ။ [PubMed]
24 ။ McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 1208-1215 ။ [PubMed]
25 ။ et al Wallace DL ။ နျူကလိယ၏ CREB စည်းမျဉ်းစိတ်လှုပ်ရှားလူမှုရေးအထီးကျန်-သွေးဆောင်အပြုအမူလိုငွေပြမှု mediates accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2009; 12: 200-209 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Detke MJ, Rickels M က, differential serotonergic နှင့် noradrenergic စိတ်မကျဆေး Antidepressants ကထုတ်လုပ်သည့်ကြွက်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက် Lucky ဗြဲ Active ကိုအပြုအမူတွေ။ Psychopharmacology (Berl) 1995; 121: 66-72 ။ [PubMed]
27 ။ et al Renthal W က။ ကိုကင်းများက chromatin စည်းမျဉ်းများ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ sirtuins များအတွက်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 62: 335-348 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ et al Todtenkopf က MS ။ နျူကလိယအတွက် AMPA အဲဒီ receptor subunits နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 11665-11669 ။ [PubMed]
29 ။ Bredt DS, Nicole RA ။ excitatory synapses မှာ AMPA အဲဒီ receptor လူကုန်ကူးမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 40: 361-379 ။ [PubMed]
30 ။ et al Conrad KL ။ accumbens GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား mediates ။ သဘာဝ။ 2008; 454: 118-121 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ သွက် S ကိုဘရောင်းမှာ IR ။ အဆိုပါ extracellular matrix ကိုပရိုတိန်း SC1 / hevin ကြွက် lithium-pilocarpine ဖမ်းဆီးရမိမော်ဒယ်အတွက် status ကို epilepticus အောက်ပါ excitatory synapses မှ localizes ။ J ကို neuroscience Res ။ 2008; 86: 2895-2905 ။ [PubMed]
32 ။ Nikulina EM, Covington သူ, 3rd, Ganschow L ကို, Hammer RP, Jr က Miczek Ka ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့် amygdala အတွက် Fos: ထပ်ခါတလဲလဲအကျဉ်းလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင်စိတ်ကြွဆေးမှရေရှည်အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံခံလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ။ neuroscience ။ 2004; 123: 857-865 ။ [PubMed]
33 ။ Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 11-34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Haney M က, Maccari S က, က Le Moal က M ရှိမုန် H ကို, Piazza PV ။ လူမှုစိတ်ဖိစီးမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 698: 46-52 ။ [PubMed]
35 ။ Sesack SR, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ Cortico-Basal Ganglia ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကို: microcircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 27-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Kalivas PW, Volkow N ကို, စွဲလမ်းအတွက် Seaman ဂျေစီမံထားခြင်းမရှိသောလှုံ့ဆော်မှု: prefrontal-accumbens အချိုမှုဂီယာအတွက်ရောဂါဗေဒ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 647-650 ။ [PubMed]
37 ။ Reynolds က SM, Berridge KC ။ နျူကလိယ accumbens အတွက်အချိုမှုစိတ်ခွန်အားနိုး ensembles: ကြောက်ရွံ့နို့တိုက်ကျွေးရေး၏ rostrocaudal shell ကို gradients ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 17: 2187-2200 ။ [PubMed]
38 ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Floresco SB, Goto Y ကို, Lodge DJ သမား။ dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်၏ပစ်ခတ်ရန်၏စည်းမျဉ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30: 220-227 ။ [PubMed]
39 ။ Campioni M က, Xu M က, McGehee DS ။ နျူကလိယ Accumbens အချိုမှု Synaptic ပလပ်စတစ်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများ။ J ကို Neurophysiol ။ 2009 [PubMed]
40 ။ Rada P ကို, et al ။ နျူကလီးယပ်အတွက်အချိုမှုလွှတ်ပေးရေး PORSOLT ရေကူးစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းအမူအကျင့်စိတ်ကျရောဂါတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် accumbens ။ neuroscience ။ 2003; 119: 557-565 ။ [PubMed]
41 ။ Roitman MF, ဝီ RA, Carelli RM ။ နျူကလိယတွင် neuron ပင်, ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိအရသာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ညှိသူတို့ရဲ့ခန့်မှန်းဝှက်နှင့်မော်တာ output ကိုချိတ်ဆက်နေကြပါတယ် accumbens ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 587-597 ။ [PubMed]
42 ။ et al Tremblay LK ။ တစ်ဦး dopaminergic စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ထင်ရှားအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက်ပြောင်းလဲဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ functional neuroanatomical အလွှာဟာ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 62: 1228-1236 ။ [PubMed]
43 ။ Vythilingam M က, et al ။ ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာမှခံနိုင်ရည်အတွက် circuitry ဆုချ: ဒဏ်ခံအထူးတပ်ဖွဲ့များစစ်သားတစ်ဦး fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009; 172: 75-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ et al Schlaepfer TE ။ circuitry ဆုချမှနက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွဆန့်ကျင်ဘက်အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက် anhedonia လျော့ချ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 368-377 ။ [PubMed]
45 ။ Churchill L ကို, Swanson CJ, Urbina M က, Kalivas PW ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းသည့်နျူကလိယ accumbens နှင့်အမူအကျင့်ာင်းဖွံ့ဖြိုးကြောင်းကြွက်၏ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအချိုမှု receptor subunit အဆင့်ဆင့်ပွောငျးလဲ။ J ကို Neurochem ။ 1999; 72: 2397-2403 ။ [PubMed]
46 ။ Boudreau AC အ, Reimers JM, Milovanovic M က, ME Wolf ။ ကြွက်နျူကလိယထဲမှာဆဲလ်မျက်နှာပြင် AMPA receptors ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကတိုး accumbens ပေမယ် mitogen-activated ပရိုတိန်း kinases ၏ပြောင်းလဲ activation နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ကင်းစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက် Internalize အတွင်း။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 10621-10635 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47 ။ et al Anderson က SM ။ CaMKII: ကင်းရှာထဲမှာ accumbens dopamine နဲ့အချိုမှုစနစ်များကိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ထဲကဓာတုပစ်စညျးတံတား။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 344-353 ။ [PubMed]
48 ။ Taha လုပ် SA, Fields HL ။ နျူကလိယ၏တားစီးအာရုံခံဆုလာဘ်-ညွှန်ကြားအပြုအမူများအတွက် Gates signal ကိုဝှက် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 217-222 ။ [PubMed]
49 ။ Frischknecht R ကို, et al ။ ဦးနှောက် extracellular matrix ကို AMPA အဲဒီ receptor နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိုဘိုင်းနှင့်ရေတိုရေရှည် Synaptic plasticity သက်ရောက်သည်။ နတ် neuroscience ။ 2009; 12: 897-904 ။ [PubMed]
50 ။ Chen က J ကို, et al ။ ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်, ပစ်မှတ်ထားဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူ Transgene တိရိစ္ဆာန်များ။ Mol Pharmacol ။ 1998; 54: 495-503 ။ [PubMed]